I-Enif TV: Konke Odinga Ukwazi | I-RoidHub
Isitolo esilinganiswe kakhulu se-Android
Blog Ezokuzijabulisa Ikhasinkomba
»I-Enif TV: Konke Odinga Ukukwazi
I-Enif TV: Konke Odinga Ukwazi
4.7 / 5 ( 8 amavoti )
Idrama njengendlela yobuciko bezinkulumo ingenye yemithombo evamile futhi eyinhloko yokuzijabulisa kubabukeli bomhlaba abakhulu. Sikhuluma nge-Enif TV futhi kuyinto efanele lolu hlobo lokuzijabulisa.
Izilaleli zaseNingizimu Melika zine-alacrity ye-opera yesosi yingakho ngemuva kwamafilimu, yidrama ye-TV kanye nama-serial enza uhlobo oluhamba phambili lwemithombo yezokuzijabulisa.
Kungaleso sizathu imboni ekhulayo yalokhu ukuzijabulisa kwesikrini esincane esifundeni yonke iveza uchungechunge ngezihloko ezahlukahlukene zenhlalo, zamasiko nezinye izihloko.
Ngasikhathi sinye, kule nkathi yomhlaba jikelele. Sivezwa imibono yesiko lezinye izifunda. Eqinisweni, umuntu wanamuhla uyinhlanganisela yamasiko amaningi iningi lawo elisuswa ngokwendawo nangokomzimba kuye.
Enye indlela enjalo yethonya lamasiko ukutholakala kokuqukethwe kokuzijabulisa okuvela kuyo yonke iplanethi. Emhlabeni jikelele, kunemithombo embalwa yemikhiqizo yedrama engaheha izithameli ezivela ezifundeni ezahlukahlukene zomhlaba. Isibonelo esisodwa esinjengalesi iThanda iTheku.
Yini i-Enif TV
Ezinye izindlela ze-Enif TV
I-YouTube: I-TRT Ertugrul nge-PTV
I-Urdu / Hind Dramas kuselula ye-Android
Lesi siteshi se-YouTube esizinze eDubai futhi sihlose ukuletha okuqukethwe okungcono kakhulu okuvela kwizimboni ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Lesi siteshi sethulwe ukuthi sikhiqize okunye okuqukethwe okumangalisayo kwevidiyo yababukeli abakwi-Hindi nangesi-Urdu.
Lokhu kufaka phakathi ukuhumusha kwezindlela ezinhle zomsebenzi ezivela ezifundeni ezahlukahlukene ezilaleli ezikhuluma isi-Urdu nezesiHindi.
Ungafinyelela lokhu nganoma yisiphi isikhathi nendawo lapho ukhokha khona imali ekhishelwayo esiteshini. Ngakho-ke uma ufuna i-Urdu noma i-Hindi eyayithiwa nguKurulus Osman Episode noma othanda i-Urdu / Hindi ebizwa ngokuthi ngu-Ertugrul Ghazi. Ungakubuka konke lokho ngendlela oyithandayo.
Into enhle nge-YouTube ukuthi ukwazi ukufinyelela okuqukethwe kufoni yakho ephathekayo noma ngasikhathi sinye xhuma kwi-TV yakho ye-Android bese uyibuka esikrinini esikhulu nomndeni wakho nabangane.
Ukuthi usebenzisa impelasonto yonke ekhaya noma uyahamba phakathi komsebenzi wakho nekhaya lakho. Ungaxhuma kwi-inthanethi bese uqala ukubuka ukusuka lapho ushiye khona okokugcina.
Ikakhulu, uma ucabanga ukuqala ukubuka i-Osman Ghazi Turkish serial. Lesi yisiteshi okufanele usilandele. Ungathola zonke iziqephu ezilandelwe wena. Ushayelwe ezilimini zama-Hindi nezingu-Urdu ngemisindo efanelekile, ngeke uphuthelwe lapha.
Uma uzibuza ngezinye izindlela zalesi siteshi se-YouTube se-Enif TV. Bese uqhubeka nokufunda. Lapha sizokunikeza imininingwane yeminye imithombo ukuze ujabulele isiTurkey nokunye okuqukethwe okubizwa ngokuthi Hindi kanye ne-Urdu. Ungasebenzisa ifoni yakho ephathekayo, i-laptop, noma ikhompiyutha yakho ukujabulela le mikhakha yedrama esebenzayo.
Leli iphiko lokuzijabulisa lePakistan Television Network. Umsakazi wezwe ngokusemthethweni unikezwe ithuba lokuqala isivunguvungu salezi zikhathi zonyaka ngokungenisa kukaDiliris Ertugrul ophinde wabizwa njengo-Ertugrul Ghazi.
Iveza i-Urdu dubbed version ukuthi ababukeli abangamaHindi nayo bangayijabulela ngaphandle kobunzima.
Uma ungafuni ukubuka idrama kuthelevishini nganoma yisiphi isizathu. Bese kuba nezinye izinketho ongazihlola futhi. Ungaya ku-YouTube: TRT Ertugul nge-PTV.
Lesi yisiteshi esisemthethweni sokwehlukanisa iziqephu zomdlalo we-Ertugrul kuhlobo olubizwa ngokuthi. Ungaqala kunoma yisiphi isiqephu uphinde ume kancane bese ushiya noma kunini ukuze ubuye futhi.
Ezinye izindlela ezenzelwe abasebenzisi beselula. Uma unefoni ephathekayo ye-Android ke Nazi ezinye izindlela ezingcono kakhulu ze-Enif TV.
Ngemuva kwalokho ungafaka izinhlelo ezimbalwa ezizokunikeza ukufinyelela okuqondile kumasizinda we-Turkish abizwa ngezilimi zasendaweni. Lokhu kufaka phakathi Abbasi TV Apk, Uhlelo lokusebenza lweFilms, Futhi UMakki TV.
Ungahlola okuningi ngalezi zinhlelo bese ulanda ifayela le-APK ngompompi owodwa. Ngemuva kwalokho ungajabulela amadrama aseTurkey kumafoni we-Android noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi.
I-Enif TV iyisengezo sakamuva emithonjeni eku-inthanethi kusuka lapho ungajabulela khona amadrama nokunye okuqukethwe kwe-showbiz emhlabeni wonke. Lapha, lezi ziqephu zabizwa ngawe ngesiHindi nangesi-Urdu. Konke okudingayo ukuxhumana kwe-inthanethi nedivayisi yokufinyelela isiteshi.
Osman Ghazi ngesi-Urdu
AmaDramas aseTurkey ku-Android
I-Art & Design (3)
I-Maps yamahhala nokuzula APP (1)
Ezempilo & Ukufaneleka (8)
Amamephu nokuzula (2)
Ukuvakasha & Endaweni (6)
Isiqophi Abadlali & Abahleli (20)
Ukudla nokuphuza (2)
Game Ukugenca (23)
Ezempilo & Ukufaneleka (7)
Izinhlelo Zokungena (26)
Indlela yokuphila (5)
Izindaba Nomagazini (4)
Ukwenza okuthandwa nguwe (9)
Ukugenca kwe-WIFI (4)
I-copyright © 2020 I-RoidHub - Isitolo Esiphezulu se-Android